आइफोन स्लो हुँदा एप्पललाई ११ करोड जरिवाना ! « Pen Nepal
आइफोन स्लो हुँदा एप्पललाई ११ करोड जरिवाना !
Published On : 19 November, 2020 5:01 pm By : पेननेपाल
एजेन्सी । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले आफूमाथि लागेको पुराना आईफोन ‘स्लो’ गराएको आरोपसम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन ११ करोड ३० लाख डलर बुझाउने भएको छ । एप्पलले अमेरिकाका ३४ राज्य र सरकारसँग यो मुद्दा सुल्झाउने सम्झौता गरेको क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता साभियर बेकेराले जानकारी दिए । आईफोनमाथि जानाजानरुपमा ब्याट्रिको आयु बढाउन पुराना आईफोन स्लो गरेको आरोप लागेको थियो । यद्यपि आईफोनले भने यसो सफ्टवेयर अपडेटका कारण पुराना आईफोन स्लो हुने गरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
यस विषयमा आईफोनले भने आधिकारिकरुपमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।